詩篇 1 JCB - Nnwom 1 AKCB
ƆFA A EDI KAN
1Nhyira ne onipa a
ontie amumɔyɛfo afotu
na onni nnebɔneyɛfo nhwɛso akyi
na ɔntena fɛwdifo tenabea.
2Na mmom, Awurade mmara sɔ nʼani,
na osusuw ho awia ne anadwo.
3Ɔte sɛ dua a wɔatɛw wɔ asuten ho,
na ɛsow nʼaba ne bere mu a
nʼahaban no nguan da.
Nea ɔyɛ biara yɛ yiye.
4Nanso nnebɔneyɛfo nte saa;
wɔte sɛ ntɛtɛ a
mframa bɔ gu.
5Enti amumɔyɛfo rentumi nnyina atemmu no ano,
na nnebɔneyɛfo nso rentena atreneefo asafo mu.
6Efisɛ Awurade kyerɛ ɔtreneeni kwan
nanso amumɔyɛfo kwan de, ɛbɛyera.
AKCB : Nnwom 1